Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSiiri
I-91% yeendwendwe zakutshanje inike uSiiri iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
IVilla Nicholas ikwiTahkuranna, kufutshane nolwandle, umgama nje wemizuzu eli-15 ukusuka kwikomkhulu lase-Estonia iPärnu. Ibonelela ngendawo yokuzenzela ukutya enebalcony. Unxweme lolwandle oluneelwandle ezininzi ezinesanti kumgama ozimitha ezingama-400 kuphela
Sonni Tee 4 - Cottage, indlu
IVilla Sonni tee 4 ikwindawo entle eselunxwemeni, kwiNqila yasePärnu, kwilali yaseTahkuranna, imizuzu eli-15 ngemoto ukusuka kweyona ndawo iphambili yase-Estonia yokufikela ehlotyeni enolwandle olubalaseleyo lwentlabathi emhlophe kwaye etsala iindwendwe ezingaphezu kwama-30,000 ngosuku ngeenyanga zasehlotyeni. Ukuphumla kwi-villa, abathengi banokuba kufutshane kuzo zonke iinkonzo kwaye bayonwabele indalo kude nesiphithiphithi.
Ulwandle kunye nolwandle oluqhelekileyo lwendalo luhamba malunga ne-400 m ukusuka kwi-villa kwaye kukho umbono omkhulu elwandle. Abathengi banokonwabela ukutshona kwelanga okuhle ukusuka kwibalcony yomgangatho wesibini. Umzantsi wonxweme awunzulu kwaye unesanti. Ilungile ebantwaneni. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile elunxwemeni. Le villa ilungele isibini okanye usapho oluncinci oluxabisa inzolo kufutshane nolwandle kunye neenkonzo kunye nezinto ezinomtsalane kwindawo enkulu yase-Estonia yasehlotyeni iPärnu.
I-villa yelog yakhiwa ngo-2007. Abantu aba-7 banokuhlaliswa kule villa. Umgangatho ophezulu wesikhumba kunye nefenitshala yomthi oqinileyo yayisetyenziswa kuyilo lwangaphakathi. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi leenjongo zonke elinekhitshi kunye negumbi lokuhlambela eline-WC kunye neshawari. Izixhobo ezisisiseko zinokufumaneka ekhitshini-igumbi lokuhlala kodwa umoya upholile kwaye izixhobo zasekhitshini zintsha (2007). Kukho isitovu sombane, ifriji, umenzi wekofu, iketile yombane, ishawari, indlu yangasese, iwashing. umatshini, ibarbecue kunye nezithethi zomdlali weMP3 kwivilla. Isitovu esibaswa ngamaplanga sigcina i-villa ifudumele kwaye songeza umoya opholileyo. Kumgangatho wesibini kukho iholo elineebhedi ezintathu zomntu omnye kwaye ngaphaya kwayo kukho igumbi lokulala elineebhedi ezimbini. Kukwakho neterrace kumgangatho ophantsi kunye nebalcony ezijonge emazantsi zombini.
Lo mmandla ulungele ukubona indalo entle yaselunxwemeni kunye neentaka kunye nezilwanyana zasendle kunye nokuhlola amaphandle ase-Estonia kwaye mhlawumbi neLatvia. Maninzi amathuba emisebenzi eyahlukeneyo kule ndawo kwaye abathengi banokungena ekukhweleni ihashe, intaka kunye nokubukela izilwanyana zasendle, ukuqubha, unxweme kunye nokuhamba ngehlathi ecaleni kwemizila, ukutyibilika kwelizwe kunye nokudlala igalufa. Iilali iTahkuranna kunye neVõiste ezineevenkile, isikhululo segesi kunye neMarina encinci zikufuphi.
Iziko lezempilo laseJõulumäe libekwe malunga neekhilomitha ezi-2 kude kwaye kukho izinto ezininzi ezinokwenzeka zemisebenzi eyahlukeneyo (igalufa encinci, iinkundla zevoli ezi-3, ibala lebhola ekhatywayo elunxwemeni, iinkundla ze-badminton ezi-2, ibala lebhola ekhatywayo, i-100 m yokubaleka indawo njl njl). Abathengi banokuqesha imidlalo eyahlukeneyo kunye nezixhobo zemidlalo apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Siiri